म दोहर्याएर भन्छु नयाँ शक्ति र प्रचण्ड माओवादीको एकता हुन्छ : मुमाराम खनालको अन्तर्वार्ता - Ratopati
म दोहर्याएर भन्छु नयाँ शक्ति र प्रचण्ड माओवादीको एकता हुन्छ : मुमाराम खनालको अन्तर्वार्ता
पूर्व माओवादी हुँदै बामविश्लेषक बनेका मुमाराम खनालले केही महिना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको राजनीति गरे । तर, नयाँ शक्तिमा पनि उनी लामो समय टिकेनन् । यसअघि नै उनीमाथि अस्थिर स्वभाव रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । नयाँ शक्तिले अनुशासन कारवाही गरेकै दिन असोज २१ गते उनले आफु नयाँ शक्तिबाट अलग भएको घोषणा गरे । नयाँ शक्तिमा किन जोडिएका हुन् र किन छाडे ? खनालसँग रातोपाटीले गरेको अन्तर्वार्ता :
मुमाराम खनाललाई मानिसहरु अस्थिर आत्माको रुपमा किन व्याख्या गर्छन् ?
मेरो जीवन विल्कुल अस्थिरतामा छैन । २५–३० वर्ष कमिटेड जीवन बिताउने मान्छे कसरी अस्थिर हुन सक्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म वामपन्थी राजनीतिमै सक्रिय छु । पछि माओवादी आन्दोलनको आन्तरिक सङ्घर्षबाट आफूलाई अलग्याए र केही समय स्वतन्त्र जीवन व्यतित गरेँ । तर कुनै पनि पार्टी चाहर्दै हिँड्ने काम भने कहिलै पनि गरिनँ । मेरो जीवनको दुईवटा पाटा छन् एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको दोस्रो स्वतन्त्र नागरिकको ।
लामो समयसम्म वामपन्थमा जोडिएको मान्छे त्यहाँबाट विकर्षित हुनुको कारण ?
मेरो वामपन्थप्रतिको विकर्षण होइन, १९७० को दशकयता भएको रसियन समाजवादी क्रान्तिको मोडेल र चिनियाँ समाजवादी क्रान्तिको मोडेलमा परिवर्तन भएर जसरी क्रमशः युद्ध समाजवाद र व्यक्तिवादी चिन्तन प्रणालीको विकास भयो त्यसबाट माथि उठेर मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मेरो सोचाइ हो ।
तर माओवादीबाट आउनुभएका साथीहरुलाई के लाग्यो भने तुरुन्तै पार्टी बनाएर पैसा उठाउन हिँडिहाल्नु पर्यो । उहाँहरुलाई पार्टी बनाएर पैसा उठाउने निकै हतारो भएको मैले पाएँ । जतिबेला रङ्गशालाबाट पार्टी घोषणा गरियो त्यसबेला समेत मलगायत साथीहरुको ठूलो समूहले अहिले नै पार्टी घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने मत राखेका थियौँ । तर हामी त्यसमा असफल भयौँ ।
माघ १० मा नयाँ शक्तिमा जोडिनुभयो र लगत्तै रिजाइन पनि गर्नुभयो त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो त ?
म फेरि निवेदन गरौँ माघ १० मा मैले कुनै पार्टी ‘ज्वाइन’ गरेको होइन । नेपालमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने भएपछि विभिन्न कोणबाट यस बहसलाई अगाडि बढाउने क्रममा मसहित अन्य साथीहरु पनि लागेका थिए । त्यसमा बाबुरामजी पनि लाग्नुभएको थियो । मैले त्यो बहसलाई लामो समयसम्म चलाउन पर्छ भन्ने सोचमा थिएँ र पार्टीलाई डिडक्टिभ होइन कि इन्डक्टिभ मोडेलबाट अगाडि बढाऊँ भन्ने थियो । बाबुरामले एउटा खाले पार्टीको कल्पाना गरेर त्यहाँ मान्छेहरुलाई भर्ती गर्ने होइन कि नयाँ शक्तिको समाजमा आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बारेमा बहस गरेर अगाडि बढ्ने मेरो सोच हो ।
आश्चर्यजनक ढङ्गबाट बाबुरामजी वैचारिक छलफलहरुमा पूरै उदासिन हुनुभयो । हामीले थ्योराइज गरेको मूल कुरा भनेको नेपाल लेफ्ट डेमोक्रेटिक सोसलिजमको कोणबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हो । त्यो भनेको परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर त्यसको सार प्रगतिशीलता नै हो ।
तर माओवादीबाट आउनुभएका साथीहरुलाई के लाग्यो भने तुरुन्तै पार्टी बनाएर पैसा उठाउन हिँडिहाल्नु पर्यो । उहाँहरुलाई पार्टी बनाएर पैसा उठाउने निकै हतारो भएको मैले पाएँ । जतिबेला रङ्गशालाबाट पार्टी घोषणा गरियो त्यसबेला समेत मलगायत साथीहरुको ठूलो समूहले अहिले नै पार्टी घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने मत राखेका थियौँ । तर हामी त्यसमा असफल भयौँ । बाबुरामजीले पार्टी तुरुन्तै घोषणा गरौँ भनेर जोड दिएकाले हामीले हाम्रो मान्यता छोड्यौँ । अहिले पनि वैकल्पिक शक्तिका लागि नेपालमा धरातल तयार भएको छैन । नयाँ शक्ति पार्टीको संरचना नै माओवादी संरचनामा खडा गरिएको हुनाले अन्य समूह आउनै सकेन । त्यसैले म यो पार्टी बन्नुभन्दा अघि नै त्यहाँबाट बाहिरिएको हुँ । बच्चा जन्माउनका लागि ९ महिना कुर्नुपर्नेमा ३ महिनामै हामीले बच्चा जन्माइ दियौँ ।
एउटा ब्युरोक्रेसी, एउटा अल्ट्रा लेफ्ट तथा अर्को दक्षिणपन्थी कोणबाट आएका विभिन्न समूहलाई मिलाउन बाबुरामलाई कतिको सकस परेको छ होला ?
आश्चर्यजनक ढङ्गबाट बाबुरामजी वैचारिक छलफलहरुमा पूरै उदासिन हुनुभयो । हामीले थ्योराइज गरेको मूल कुरा भनेको नेपाल लेफ्ट डेमोक्रेटिक सोसलिजमको कोणबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हो । त्यो भनेको परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी होइन तर त्यसको सार प्रगतिशीलता नै हो । आजसम्म डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट राइट खुट्टाबाट र लेफ्ट डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट लेफ्ट खुट्टाबाट मात्रै अगाडि बढेको हुनाले त्यो पनि लङ्गडो भयो । दुवै खुट्टाले टेक्ने समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर हामीले छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । दुवै खुट्टाले टेक्ने समाजवाद भनेको अबको लेफ्ट डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट हो । लेफ्टभित्र प्रचुर मात्रामा डेमोक्रेसी भने हुनै पर्दछ ।
बाबुरामजीको राम्रो पक्ष भनेको पुरानो कुरा अडिएर बसी रहनुहुन्न । अहिले एकाध अपवादलाई छोड्ने हो भने बाबुरामसँग सरकारमा रहँदाखेरी प्रत्यक्ष लाभ लिएका साथीहरु नै उहाँको पार्टीमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ । ती उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका साथीहरु नै हुन् । व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएकाहरु राजनीतिक मुद्दामा धेरै रुचि राख्दैनन् । किनभने उनीहरु लामो राजनीतिक विकास प्रक्रियासँग अवगत नै छैनन् । त्यसकारण नयाँ शक्तिमा माओवादीबाट अएको हिजोको जुन जमात छ अथवा माओवादीभित्र जुन अन्तरसङ्घर्ष थियो त्यही यस पार्टीभित्रको सङ्घर्ष हो ।
भनेपछि माओवादीबाट आएकाहरु र राइटिस्टहरु बीचको सङ्घर्षको उर्वरभूमि नयाँ शक्ति हो भन्न खोज्नुभएको ?
त्यो सङ्घर्षले अझै वैचारिक क्ल्यासको रुप धारण गरी सकेको त छैन तर सङ्घर्ष भने निरन्तर छ । यही नेर अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने पराम्परागत पार्टी जस्तो भएको भए यसले क्ल्यासमा निम्त्याइ सक्ने थियो । यो त पार्टी नै बनिसकेको छैन ।
कुन–कुन राजनीतिक लाइनहरु त्यहाँ सबैभन्दा धेरै सङ्घर्षरत छन् त ?
अझै लाइन बनिसकेको छैन । त्यहाँ पूर्व माओवादीहरुको एउटै लाइन छ । उनीहरु रमाउने भनेकै व्यक्तिवादमा हो । गैरमाओवादीहरुको लाइन भनेकै बाबुरामसँग नजिक हुने लाइन हो । अहिले उहाँहरुले कुनै पनि डिबेड ओपन गर्नुभएको छैन । त्यसमा रामेश्वरजीको र मेरो पार्टी विधिमा चल्नुपर्यो भन्ने भनाइ हो ।
भनेपछि विधि छैन ? त्यो भनेको के हो त ?
पार्टीमा पूरै व्यवक्तिवाद छ । पार्टीमा कसले कसलाई भर्ती गर्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन । कुनै पनि कमिटीमा छलफल नै नगरी केन्द्रीय समितिमा, परिषदमा मान्छे थपिन्छन् । कहीँ पनि छलफल नै नभई कार्यक्रम तय गरिनछन् र ती कार्यक्रमहरुमा माओवादी साथीहरु मात्रै जानु हुन्छ । संस्थागत निर्णयहरु भएनन् भन्ने गुनासो नयाँ पार्टीमा छ । म पनि त्यस कुरामा सहमत छु । मेरो कुरा के हो भने नयाँ शक्ति भनेको बाबुरामको माओवादी समूह नै हो । नयाँ शक्ति भन्ने कुरा मेरो आवश्यकताले खोल्ने हो कि जनताको आवश्यकताले ? राष्ट्रको आवश्यकता हो कि बाबुरामको ? उहाँहरुलाई बाँच्नका लागि पार्टी चाहिएको हो कि मुलुक परिवर्तन गर्न ? यी आधारभूत प्रश्नहरुका विषयमा मेरा अझै पनि प्रश्नहरु छन् ।
पार्टीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र विधिको कुरा गर्ने तपाईंले बाबुरामलाई मोदीलाई जसरी प्रोजेक्सन गरेर विज्ञापन छापिँदा किन नबोलेको ?
औपचारिक रुपमा म पार्टीमा छउन्जेल यो विषय पार्टीको सबैभन्दा धेरै बहसको विषय बनेको थियो । त्यतिबेला पनि त्यो विज्ञापनको कुरा बाबुरामबाहेक कसैलाई पनि थाहा थिएन । ज्याकेट एडको बारेमा हामी कसैलाई केही पनि थाहा थिएन । मैले यो कुराको आँकलन गरेर नै पार्टीको प्रचार विभागबाट राजीनामा दिएको थिएँ ।
स्वतन्त्र रुपमा बाबुरामजीको नयाँ शक्तिको कुनै भविष्य छैन । उहाँहरुले जुन अभ्यास गरी रहनुभएको त्यो माओवादी अभ्यास नै हो । त्यसका लागि माओवादी नै छ भने नयाँ शक्ति भन्ने माओवादी किन चाहियो ।
मानी लिउँ एडको विषयमा कसैलाई थाहा भएन कार्यक्रम स्थलमा बनेको बोर्डमा बाबुरामलाई प्रोजेक्ट गरिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन ?
त्यसलाई त मैले हटाउन मिलेन । त्यसमा पनि सबैको विरोध भयो । बाबुरामको व्यक्तिवादको विषयलाई लिएर विरोध भयो । त्यो कुन संस्थाबाट अनुमोदित भयो भन्ने कुरा पनि अगाडि आयो तर त्यसले निष्कर्ष पाउन सकेन । त्यसैले बाबुरामजीको अपारदर्शिताको कुरा पनि उठेको थियो । उहाँले जहिले पनि त्यस कुरालाई अरु साथीहरुले राखिदिए भनेर उम्कनुभयो । अहिले पनि यो कुरा असन्तुष्टिको मूल कारण बनेको छ । बाबुरामको विषयमा यो लज्जास्पद कुरा हो ।
नयाँ शक्तिभित्र बहस चल्दै गरेका पाँच मूल विषय के–के हुन् ?
पहिलो– साङ्गठनिक स्वरुप । दोस्रोः लेफ्ट डेमोक्रेटिक सोसलिजममा जाने कि लेफ्ट भन्ने कुरालाई समाहित नगर्ने भन्ने । यसमा मुख्य बहसको केन्द्र माओवादीबाट आएको शक्ति र अर्को माओवादी इतरको शक्तिबीच नै हो । तेस्रोः पार्टीको पारदर्शिता । किनभने अहिलेसम्म भेलामा कति पैसा खर्च भयो, कहाँबाट जुट्यो कसैलाई पनि थाहा छैन । चौथोः व्यवस्थापन । व्यवस्थापकीय हिसाबबाट नयाँ शक्तिको कार्यालय १८औँ शताब्दीको छ । पाँचौँः संस्कृतिको बहस । चरित्रका हिसाबले कोही त्यहाँ मानव तस्कर छन् भने कोही अख्तिारले १० लाखसहित समाएका मान्छे । जस्तै एमाओवादी केन्द्रको नाममा गाडी छ चड्ने मान्छे भने नयाँ शक्तिको छ । यो चरित्र र संस्कृतिको कोणबाट कति मिल्ने कुरा हो ।
नयाँ शक्तिको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
स्वतन्त्र रुपमा बाबुरामजीको नयाँ शक्तिको कुनै भविष्य छैन । उहाँहरुले जुन अभ्यास गरी रहनुभएको त्यो माओवादी अभ्यास नै हो । त्यसका लागि माओवादी नै छ भने नयाँ शक्ति भन्ने माओवादी किन चाहियो । उहाँको सबै अभ्यास प्रचण्डसँग एकता गर्ने उद्देश्यले लक्षित छन् । म फेरि दोहर्याएर भन्छु नयाँ शक्ति र प्रचण्ड माओवादीको एकता हुन्छ । अर्को निर्वाचनसम्म उहाँहरु एक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँका सबै गतिविधि एकतातर्फ नै लक्षित छन् । प्रचण्डसँग एकता हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
तपाईं फेरि नयाँ शक्तिमा फर्कने सम्भावना नि ?
उहाँहरुको पाटोबाट फर्किन पर्यो भनेर छलफल चलाइ रहनुभएको छ । नयाँ शक्तिको अभियानमा म सक्रिय हुन्छु । त्यो नेपाललाई आवश्यक छ । बाबुरामजी पनि पार्टी सङ्गठनलाई इन्डक्टिभ मेथडबाट अगाडि बढाउन राजी हुनुभयो भने म तयार छु । मलाई केही समस्या छैन । म बाबुरामसँग होइन कि प्रचण्डसँग पनि जान तयार छु । उहाँहरुले विगतको कुरा छोडेर नयाँ ढङ्गले आउनु हुन्छ भने किन त्यो सङ्कुचन छ र हामीमा । उहाँ र मेरो व्यक्तिगत केही पनि होइन । समाजलाई बुझ्ने सवालमा दुवैको मत अन्तर परेको मात्र हो ।